Nọgidesiri ike na ụgbọelu maka awa 3.5 | Martech Zone
Amaara m ihe gbasara ihu igwe ma ghọta na ụgbọ elu ụgbọ elu chọrọ ịchebe ndị mmadụ. Nwa m nwanyị dị afọ iri na anọ nọ na njem mbụ ya na klaasị ya na Washington DC Ọ nọ na-ezitere m foto nke White House, Ncheta Washington, Iwu na saịtị ndị ọzọ ebe ọ bịarutere n'abalị Sọnde.
Anyị kwụrụ ezigbo ego maka njem ahụ, ụlọ akwụkwọ ya emeela njem a kemgbe afọ iri abụọ. Amaghị m na ha agatụla njem dị ka nke a. Katie na ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ nọgidesiri na ụgbọ elu na tarmac ruo awa 20 na ọkara. Katie kpọrọ m wee jụọ ya ma ọ nwere ike iji nke ikpeazụ n'ime ego ya n'ehihie a na ncheta ncheta… Agwara m ya ka ọ gaa n'ihu. Ugbu a enweghị ike ịzụta nri ma agụụ na-agụ ya.
Ndị nkuzi ahụ nọ n'ụkọ, ụmụ akwụkwọ ahụ areụrụ anya mmiri, ụgbọ elu anaghịkwa agwa m mgbe ụgbọ elu ahụ ga-apụ. Ugbu a, ọ gaghị eru tupu etiti abalị mgbe ụgbọ elu ahụ rutere ebe a. M gbalịrị ịkpọ ụgbọ elu, enwetara m ozi. Agbalịrị m ịkpọ akụkọ mpaghara ma ha achọghị ịma.
US Airways, A tụkwasiri m obi na ị ga-elekọta nwa m nwanyị ma ị rara ntụkwasị obi ahụ nye. Achọghị m ịma na ị na-achọ ichebe ya, mana akpọchila ụyọkọ ụmụaka n'ụgbọelu maka awa 3.5.
Needgbọ elu ụgbọ elu kwesịrị ịdebe oke, ikekwe nkeji 45 ruo elekere, tupu ha eweghachite ndị ama n'ọnụ ụzọ ámá. Ọ bụrụ na e nwere ụgbọ elu ọzọ n'ọnụ ụzọ, gaazie ya. Rapagidesi ike karịa nke ahụ bụ ihe nzuzu. Ana m agbalị ịghara ikwe ka o mebie njem ya mana enwere m obi ọjọọ maka ya.
Tags: bravenewcodeahịaọnwụ nke nzukọAhịa ọmịikoAkara Ingwermbadamba nsụgharị
Emechaala m ma ọ bụghị ịhapụ ụgbọ elu, nke na-ekwu ihe nyere m nnukwu ịkpọasị ịnya ụgbọ ala. Ma akụkọ ndị dị ka nke gị na-eme ka m nwekwuo obi ike ịbanye ebe. Dị ka akụkọ akụkọ si dị ka nke a:
N'ezie enwere ụzọ ka mma. Okporo ụzọ dị elu? Jet ngwugwu? Ndị na-ebu ya?
Ọ ga-amasị m ịhụ ụgbọ okporo ígwè dị elu! Otu enyi m na-eji ụgbọ oloko aga Chicago kama ịnya ụgbọ ala ma ọ bụ na-efe efe ma ọ hụrụ ya n'anya. M lere anya na ọ pụtaghị na ha nwere ịntanetị, ọ bụ ezie. Ikekwe Sprint USB nwere ike ịrụ ọrụ.
N’uche m n’ezie, nnukwu nsogbu ife elu ugbua bu na odi oke onu. Enwere asọmpi dị ukwuu na ọnụahịa ga-adị ala - ọ na-emetụta ihe niile. Ọ ga-akara m mma itinye $ 500 ma ọ bụ karịa na njem okirikiri ma mesoo m nke ọma.
Jun 5, 2008 na 7:40 AM
Katie nọrọ n'ụlọ nchekwa na etiti abalị. 🙂
Jun 5, 2008 na 10:05 AM
Nrọ nke njem ụgbọelu bụ nnukwu akụkụ nke ndụ m ihe karịrị afọ 20. i weghachitere ncheta, a na m ejighachi azụ East site na Chicago iji zere njem ụgbọ elu mana ugbu a ọ dị ọnụ ala karịa ife efe. Ekele dịrị gị nwa gị nke dị ndụ mana echere m na ọ siri ike karịa gị!
Jun 5, 2008 na 10:40 AM
Ọ bụ ihe siri ike, mana ị kwuru eziokwu. Na azụ isi m ka m nọ na-agwa onwe m na ha na-ejide ha n'ihi ihe kpatara ya. Ọ dị m ka ya bụrụ na ha jidere ha naanị na ọdụ ahụ, n'agbanyeghị.
Planegbọ elu ụgbọ elu?!? Hell, mgbe anyị mere njem anyị site na Atlanta, ọ bụ njem abalị ụgbọ oloko. Nwa gi nwanyi kwesiri ekele.
NA M ga-eji ụkwụ gaa ụkwụ iri gaa ụkwụ akwụkwọ na snow. Ugwu. Ma ụzọ! '-)
Anụrụ m ya, Mike!
Ma nke ahụ bụ tupu ntụ oyi, oke!